Tantano ny fitehirizanao ao amin'ny macOS Sierra, fitaovana vaovao mahatonga anao hiasa tsara kokoa | Avy amin'ny mac aho
Amin'ny fahatongavan'i macOS Sierra tonga ny fitaovana vaovao sy ny fomba fiasa vaovao. Tsy vao izao no nilazanay anao izany ary ny porofon'izany dia ny andavanandro dia milaza aminao izahay fikafika kely sy fitaovana kely miafina ao amin'ny macOS Sierra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka kely momba ny vaovao isika mpitantana fitehirizana izay nampiharin'i Apple tao amin'ny macOS Sierra.
Mpitantana iray sahala amin'izany no tao amin'ny iOS nandritra ny kinova vitsivitsy ary ankehitriny dia fitaovana tena mitovy aminy no nampiharina tao amin'ny macOS Sierra. Izy io dia fitaovana iray ahafahantsika mitantana izay rehetra misy ifandraisany amin'ny fampahalalana izay misy ao amin'ny Mac, avy amin'ny rindranasa, ny installer, rakitra handefasana fako na ny fomba iCloud cloud syncs.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika mba hahafahantsika miresaka momba ny mpitantana ny rakitra amin'ny macOS Sierra vaovao dia ny milaza hoe aiza no misy azy ireo ary izany dia raha tsy mijery akaiky ianao dia saika tsy voamariky. Misy fomba maro hanokafana azy, fa ny mora indrindra dia ny mankany amin'ny menio > Momba an'ity Mac ity> Storage> Tantano.
Ao amin'ny varavarankely vaovao izay miseho dia manana sidebar ianao izay ahafahanao mitantana ny fitehirizana mifandraika amin'ny Applications, iOS Files, Documents, Photos, GarageBand, iCloud Drive, Mail and Trash. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tsirairay amin'izy ireo dia manome anao fampahalalana momba izay anananao ao amin'ny Mac anao ary manome anao ny safidy fitantanana an'izay atiny rehetra avy amin'ilay varavarankely tokana.
Ny anjaranao izao dia ny miditra amin'ity fitaovana ity ary manomboka mahita izay avelany anao na tsy avelany hataonao. Izahay dia efa nandinika azy nandritra ny andro maro ary mandrindra sy manasongadina asa be dia be izay nataonay taloha tamin'ny fomba hafa na amin'ny fampiharana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Tantano ny fitehirizanao ao amin'ny macOS Sierra, fitaovana vaovao ahafahanao miasa amin'ny fomba milamina kokoa
MacBook Air na MacBook, modely inona no tokony hovidiko?